चिनिया समुदायमा सबैभन्दा ठूलो र धुमधामसाथ मनाईने चाड चिनिया नयाँ वर्ष अर्थात "चाइनिज न्यु यीयर" हो। चिनिया पात्रोको पहिलो चन्द्रमासको पहिलो दिनबाट शुरु हुने यो नयाँ वर्षको दिन फरक फरक वर्षहरुमा प्रायः जनवरी र फेब्रुअरीको फरक फरक दिनहरुमा पर्दछ। २००९ मा जनवरीको २६ तारिकमा चाइनिज नयाँ वर्षपरेको थियो भने २०१० मा फेब्रुअरीको १४ मा परेको छ। त्यसैगरी २०११ सालमा फेब्रुअरीको ३ तारिकका दिन पर्नेछ। चाइनिज नयाँ वर्षलाई चाइनिज(मेण्डरिन)मा "नोङ् ली शिन् निअन् (農 曆 新年) भनिन्छ भने हङ्गकङ्गका चाइनिजहरुले क्याण्टोनिजमा "नुङ्गलिक् सन् निन् (農 曆 曆 新 年)" भन्दछन्। यसलाई लुनार न्यु यीयर (चन्द्रमा सम्बन्धी नयाँ वर्ष Lunar New Year) र स्प्रिङ्ग फेस्टीभल (Spring Festival) पनि भनिन्छ। यो जम्मा १५ दिनसम्म रहन्छ र पहिलो तीन दिनलाई खास चाइनिज नयाँ वर्षको चाडको रुपमा मानिन्छ।
पन्ध्रौं दिनलाई "युअन् शियाओ चिए (元 宵 節)" र क्याण्टोनिजमा "युन् सिउ चित्-元 節 節 भनिन्छ जसको शाब्दिक अर्थ "अँध्यारोको शुरुवात दिन" हुन्छ। यसलाई लालटिन दिवस पनि (Lantern Festival) भनिन्छ। यस दिनबाट औँसीको रातको शुरुवात हुन्छ। विद्यालयका विद्यार्थीहरुले यस दिन विभिन्न किसिमका लालटिनहरु बनाएर लाने गर्दछन। विद्यालयहरुमा लालटिन डिजाइनको प्रतियोगिता नै गराइन्छ। यस अन्तिम दिनको लालटिन दिवसलाई भने छुट्टै चाडको रुपमा पनि सूचिकरण गरिएको छ "स्प्रिङ्ग लालटिन फेस्टिभल (Spring Lantern Festival) भनेर।
चाइनिज वर्षर सामान्य वर्षा फरकः
सामान्य पात्रो अर्थात अग्रेजी पात्रो अनुसारको वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ। यसलाई बाह्र महिनामा विभाजन गरिएको छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च .....भनेर। एक महिनामा २८ देखि ३१ दिनसम्म हुन्छ। यो पृथ्वीले सूर्यलाई फन्को मार्ने अवधिको आधारमा तय गरिएको हुन्छ। यसकारण यसलाई सूर्य सम्बन्धी पात्रो (Solar Calendar) पनि भनिन्छ। एक वर्षमा पृथ्वीले सूर्यलाई पुरा एक फन्को मार्ने अर्थात आफ्नो कक्ष (orbit) मा घुम्ने र ३६५ पटक आफ्नै अक्ष(axis)मा घुम्ने भएकोले एक वर्षमा ३६५ दिन भएको हो। यस अवधिमा पृथ्वीमा हुने सम्पुर्ण ऋतुहरुको एक चक्र पूरा हुने भएकोले यसलाई र्सवमान्य रुपमा एक वर्षमानिन्छ र सामान्यतयाः यसै अनुसारको पात्रो संसारभरि प्रचलनमा आएको छ। यसरी पृथ्वीले सुर्यलाई फन्को मारेको आधारमा तय भएको वर्षलाई सुर्यवर्ष महिनालाई सुर्यमास भनिन्छ।
यता चाइनिज वर्षचाहिँ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई फन्को मार्दाको अवधिको आधारमा तय भएको हो। चिनिया परम्परामा वास्तवमा चन्द्रमाको पर्यावाची शब्द नै महिना हुन्छ। त्यसैले चाइनिजहरुको महिना र चन्द्रमा जनाउने शब्द एउटै हुन्छ युत् वा युए (月)। धेरैजसो प्रशंगमा चन्द्रमा भन्नु र महिना भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसैले पहिलो चाइनिज महिनालाई पहिलो चन्द्रमा (First moon)पनि भनिन्छ। यसरी चन्द्रमाले पृथ्वीलाई फन्को मारेको आधारमा बनेको वर्षलाई चन्द्रवर्ष र महिनालाई चन्द्रमास भनिन्छ।
सामान्य महिनामा २८ देखि ३१ दिन हुन्छ भने यता चन्द्रमाको गतिको आधारमा बनेको महिनामा साढे उनन्तीस (२९.५) दिन मात्र हुन्छ। यसरी चन्द्रमाको गति अनुसारको महिना(चन्द्रमास)ले एक वर्षमा ३६५ दिन नपुग्ने भएकोले केही वर्षको अन्तरालमा एउटा छुट्टै महिना(चन्द्रमास) थप्नु पर्ने हुन्छ। किनकि माथि नै भनिएको छ कि पृथ्वीले सुर्यलाई फन्को मार्ने अवधिको आधारमा बनेको वर्षमा मात्रसम्पूर्ण ऋतुहरुको पुर्ण चक्र पूरा हुने गर्दछ र यसले मात्र हामीलाई पुर्ण वर्षको अवधिको अनुभूति दिन सक्दछ र व्यवहारिक पनि हुन्छ। जसले गर्दा त्यस वर्ष१३ चन्द्रमासको एक वर्षहुने गर्दछ। त्यहीकारण हो कि चाइनिज नयाँ वर्षको पहिलो दिन सामान्य पात्रोको कुनै एउटै दिनमा नपरी वर्षौपिच्छे फरक फरक दिनमा पर्दछ।
सामान्य अवस्थामा फेब्रुअरी महिना जहिल्यै पनि २८ दिनको हुने गर्दछ। यही सामान्य पात्रो अनुसार पनि प्रत्येक चार वर्षमा फेब्रुअरी महिना २९ दिनको हुने गर्दछ। यस्तो फेब्रुअरी महिना २९ दिनको भएको वर्षलाई हामी अधिवर्ष अर्थात लिप्‌यियर (Leap year) भन्दछौं।
पूर्वी एसियाको महत्वपुर्ण चाडः
यो चाइनिजहरुको लागि प्रमुख चाड हो। कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, भुटान, भियतनाम र जापान लगायत चीनको भौगोलिक रुपमा नजिक रहेका देशहरुमा पनि यसको राम्रो प्रभाव परेको छ। त्यसैगरी सिंगापुर, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड जस्ता चाइनिजहरुको बाक्लो वस्ती भएका देशहरुमा पनि चाइनिज नयाँ वर्षधुमधामकासाथ मनाइन्छ। क्यानाडा लगायतका देशहरुमा विदेसिएका चाइनिजहरुले पनि यो चाड धुमधामकासाथ मनाउछन्।
प्रायः आफन्तजनकोमा कोसेलीपात बोकेर भेटघाट गर्न जाने, आफूभन्दा सानोलाई रातो खाममा पैसा दिने गरिन्छ जसलाई "लाइ सी 利是(क्याण्टोनिजमा)" भन्ने गरिन्छ। कामको मालिकले कामदारदेखि लिएर आफूभन्दा साना जोसुकैलाई पनि यस्तो "लाई सी" दिइने गरिन्छ भने आफूभन्दा ठूला र पूर्वजहरुलाई मान्नु यस चाडको प्रमुख विषेशता हो। हरेक व्यक्तिहरु एकआपसमा "कुङ् हेइ फात् छोइ !, कुङ् हेइ फात् छोइ 恭喜發財 !" भन्दै आपसमा नयाँ वर्षको शुभकामना गर्दै हिडेका हुन्छन। (कुङ्ग हेइ 恭喜 =‍ बधाई; फात् छोइ 發 財 = शुभलाभको शुरुवात) अर्थात तपाईंको लागि फलिफापको शुरुवात होस् भन्ने अगिम बधाई बाँडिरहेका हुन्छन्। धनी र पहुचवालाले ठूला ठूला फुल्न लागेका आरुका रुखहरु र अन्य फलफूलहरुको बोटहरुले घर सजाउँछन् भने अन्य सर्वसाधारणका घरहरु पनि साना तिना फलफूल र फूलका गमलाहरुले सजिसजाउ गरिन्छ।
यस पर्वमा नै चाइनिजहरुको पहिचानसहितको सांस्कृतिक नाँच ड्रागननाँच र सिंह नाँच नाँच्दछन। राती पटका पड्काउने र आतासवाजी (फायर वोर्क) गर्ने गर्दछन्।
बाह्र किसिमका जनावरः
चाइनिज वर्षको हरेक १२ वर्षलाई विभिन्न जनावरको वर्ष भनेर नामाकारण गरिएको छ जुन नेपालका गुरुङ्ग, सेर्पा (र अन्य ?) जातिहरुले मान्ने गरेको जनावारसँग ठ्याक्क मिल्न आउँदछ। जस्तो कि यस २०१० साललाई चाइनिजहरुले बाघको वर्षभनेका छन् त्यसैगरी गुरुङ्ग जातिहरुले पनि यस वर्षलाई बाघको वर्षनै मानेका छन्। यसैकारण होला चाइनिज नयाँ वर्षको प्रभाव परेको देशको सूचीमा नेपालको नाम पनि पर्न गएको छ। गत साल गोरुको वर्षथियो भने अर्को वर्ष खरायो वर्ष हुने छ। यी बार्‍ह जनावरहरुमा ड्रागन, र्सप, घोडा, भेडा, बाँदर, कुखुराको भाले, कुकुर, सुंगुर, मुसा, गोरु, बाघ र खरायो पर्दछ।
यहाँ १२ वर्षो चाइनिज नयाँ वर्षको शुरुवातको दिन र त्यस वर्षमा पर्ने १२ जनावरहरुको सूची दिइएको छ।
साल	चाईनिज नयाँवर्ष पर्ने अंग्रेजि महिना र तारिक वर्षको जनवार
2008	February 7	मुसा (Rat)
2009	January 26	गोरु (Ox)
2010	February 14	बाघ (Tiger)
2011	February 3	खरायो (Rabbit)
2012	January 23	ड्रागन (Dragon)
2013	February 10	सर्प (Snake)
2014	January 31	घोडा (Horse)
2015	February 19	भेडा (Sheep)
2016	February 8	बाँदर (Monkey)
2017	January 28	कुखुराको भाले (Rooster)
2018	February 16	कुकुर (Dog)
2019	February 5	सुंगुर(Pig)